केपी ओलीको ‘ड्रिम प्राजेक्ट रेल’ फोटो खिच्नका लागि मात्र ल्याइएको हो ? - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
केपी ओलीको ‘ड्रिम प्राजेक्ट रेल’ फोटो खिच्नका लागि मात्र ल्याइएको हो ?
घोषणापत्र (भाग २ )
२०७७ कार्तिक १, शनिबार १७:१२:००
वर्णनमिडिया, काठमार्डौं-केपी ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीमा सर्वप्रथा रसुवा गएर भने ‘ अबको दुईएवर्षपछि चीनकोको रेल यहाँबाट आउँछ ’भन्दै पहाडको भित्तो देखाए ।
केपी ओली नै यस्ता नेता हुन् जसले नेपालमा रेल गुडाएर छाड्ने अठोट लिए । त्यसभन्दा अघिको रेलको बहस हुन्थ्यो तर प्राथमिकतामा पर्दैनथ्यो ।
तर, केपी ओलीले त्यसलाई आफ्नो चुनावी घोषणाको बुदाँमा तेस्रो लहरमा राख्न भ्याए ।
तर, अहिले बुहमत सहितको दल नेकपाकै छ ओली स्वयम् प्रधानमन्त्री भएका छन् तर रसुवाको रेलले गति भने लिन सकेको छैन ।
नेपाल भ्रमणमा आउँदा सिचिनफिङले रसुवागढीको रेलको प्राजेक्ट आफै बनाउने घोषणा गर्ने अपेक्षा नेपाल सरकारको भए पनि त्यो पुरा हुन सकेन ।
के सम्म चाहि भयो भने डिपिआर चिनले बनाउने र बाँकि निर्माणको काम स्वयम् नेपालले गर्नुपर्ने देखिएपछि ओली मुख आज रेल प्रति बन्द भएको छ ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्गमा डिपिआर तयार , ठेक्का एकाएक रद्द
पूर्वपश्चिम रेलमार्गका कामको भने अब आएर डिपिआरको तयारीमा रहेको छ । रेल विभागका अनुसार डिपिआरको तयारी अवस्था रहेको र डिपिआर र त्यसको तयारीका लागि सरकार जु्टेको छ ।
तर, सरकारले पहिलोपटको निकालेको रेलको ठेक्का भने रद्द गर्न बाध्य भएको छ । रेलको ठेक्कामा मन्त्रीदेखि र सचिव र निर्माण व्यवसायीहरु समेत ठेक्का रकम बाँडफाँड गर्ने तयारी गरेपछि विभागले भदौं २१ गते ठेक्का रद्द गरेको थियो । रद्द गरेपछि भने विभागले अर्को सूचना निकाल्न सकेको छैन ।
जनकपुर जयनगर रेल गत भदौं अन्तिम साता भारतको जयनगरबाट जनकपुर आयो । नेपालमा यसभन्दा पनि पहिला रेल सञ्चालनमा भए पनि विभिन्न राजनीतिक दल मर्मतको संभ्भारको काम हुन नसक्दा त्यतिकै खेर जान पुगेको थियो ।
तर, गत भदौंको अन्मित महिनामा आएको रेलभन्दा अहिले आएको रेल पृथक र आधुनिक किसिमको छ ।
रेल आउदैगर्दा कसैंले केपी ओलीको ड्रिम प्रोक्जेट’को रुपमा रहेको रेललाई ओली सरकारले साकार पारेको भन्ने खालका टिप्पणीहरु पनि भए ।
जनकपुरबासी रेल हेर्न र फोटो खिच्न कोरोनाकै कहरमा पनि मेला लागेको जस्तै भान भएको थियो । सुरक्षानिकायलाई भिड पन्छाउन हम्मेहम्मे परेको थियो ।
एकदिन जनकपुरमा देखापरेको रेल अहिले भने फोटो खिच्न र नेपालीलाई रेलको अनुहार मात्र देखाउन आएको जस्तो भएको छ । अहिले भने उक्त रेल भारतको जयनगरमा त्रिपालले छोपेर राख्नु परेको छ ।
सरकारले जनकपुर जयनगर रेल संञ्चालनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । तर, रेल विभाग कम्पनीले भने कर्मचारीको समस्या देखाउदै रेल संञ्चालनमा ढिला गरेको हो ।
रेल कम्पनीले कर्मचारीका लागि आवेदन खुलाउने बताए पनि अझै पनि कर्मचारी नियुक्ति गर्न सकेको भने छैन ।
आवेदन दिएकामध्ये रेल क्षेत्रमा काम गरेकोअनुभवि दक्ष भनिएपनि नेपालमा रेल क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको अभाव देखिएको छ ।
त्यस कारण पनि हालसम्म पनि कर्मचारी भर्ना सकेको छैन । अस्तीपटक आएको रेल भारतीय कर्मचारीले नै लिएर आएका हुन् ।
करिब दुईअर्बमा खरिदको गरेको रेल भारतको पुनामा बनाईको हो ।
नेपालमा रेल संञ्चालन गर्नका लागी विभाग बनाइयो ।, हाल अहिले रेल कम्पनी पनि छ, ती कर्मचारीलाई भत्ता पोस्ने र आफ्ना मान्छेको भर्ती केन्द्रका लागि खोलिएको विभाग कम्पनी बर्षों भयो तर , रेल आउने सपना देखाउने केपीको ओली सरकार भने हालसम्म पनि रेल सम्बन्धी कानुन बनाउन सकेको छैन ।
रेल विभागका कर्मचारीका अनुसार स्पष्ट कानुन नबन्दासम्म नेपालमा रेल संञ्चालनमा आउन कठिन हुनेछ ।
हाल रेल सम्बन्धी कानुनमा कै कारण पनि कर्मचारी भर्नामा समस्या भएको रेल विभागको स्रोतको दाबी छ । रेल संञ्चालन सम्बन्धी विद्ययक संसदमा गतवर्षदेखिकै विचाराधिन छ ।
त्यो पास नहुँदा जनकपुरको रेल संञ्चालनमा कुनै बाटो खुल्ने छैन । रेल कर्मचारीलाए कसरी नियुक्ती गर्ने, रेल भित्र कुनै मानछेको ज्यान गएमा अथवा रेलले मानवीय तथा भौतिक क्षतिगरेमा कस्तो नियम अनुसार कारवाहि गर्ने भन्ने छैन । त्यस कारण पनि जनकपुरको फोटो खिचाउँन आएको हात्ती जस्तै हुन पुगेको छ ।